Warbixin Xarumaha Majlisku kuleeyahay gobolka Maine | Majliska.org
Waxaa maalmahan hawlo dacwadeed ku marayey, gobalka Main gaar ahaan magaalooyinka kala ah Portland iyo Lewiston, culumo ay kamid yihiin Fadilatu Sheikh Maxamed Idiris iyo Sheikh Abdalla Abul-Fadli oo ka socday Golaha Iimaamyada ee W/Maraykanka.
Gobalka Main oo ay ku nool yihiin Soomaali gaaraysa ilaa 15,000 ayaa waxaa ku yaalo maraakis ama masaajid kamid ah maraakista isu taga golaha Imaamyada ee W/Ameerika, maraakistaas oo tiraduudu hada ay tahay 25 Masaajid,oo ku kala yaalo in ka badan 17 Gobol oo ay Soomaalidu ka dagto wadankan Maraykanka.
Golaha Isutaga Imaamyada ayaa qayb wayn ka qaatay hirgalinta masaajidan ku yaalo gobalkan. Gobalkan ayaa wuxuu kamid yahay gobaladda ay dagan yihiin dadka cadaanka ah,lagama yaqaan dadka Madow oo loo yaqaan African American, Soomaalida ayaa ugu horaysay hadana uguba badan wax African ah amaba Midab madow.
Soomaalidu waxay kala kulantay labada magaalabo dhibaatooyin xaga cunsuriyada ah,taas oo sababtay inay ku dhiboodaan xataa inay samaystaan meel ay ku cibaadaystaan.
Waxyaabaha dhacay ee cajiibka ah ayaa waxaa ka mid ah, in duqa magaalada Lewiston uuba yiraahdo waa in dadkan madow oo qaxootiga ah laga raraa Gobaka,Laguna celiya meelihii ay ka soo guureen,taas oo sababtay in dad badan xataa ay uga guuraan magaalooyinka kale.
Ilaahay fadligii adkaysi iyo sabar badan ka gadaale, waxaa Suuro gashay in si fiican loodago,la iskana difaaco kuwa cunsiriyada ku dhaqmaayo. Illaahay wuxuu qadaray in masaajid laga iibiyo bartamaha downtown ka ama fasmagaalaha,taas oo kicisay banaankana u soo saartay nacaybkooda oo ay la soo shaacbaxaan xumantay qarsanayeen iyo cadownimaday u qabayn islaamka iyo ehelkiisa, Magaalada Lewiston gaar ahaan waa meesha lagu daabaco lagana faafiyo baybalka (bible),iyadoo Gobolka oo dhana uuba yahay Gobal bible.
Caradaasi waxay keentay,in muslimiintii oo salaad ku jiro oo sujuudsan in lagu sootuuro madax doofaar oo markaa laga soo gooyay doofaarkii oo dhiigu uu ka da’aayo.
Markii ugu danbaysay waxaa lagu guulaystay in masaajidkii la dhamaystiro, dacwadiina la sii xoojiyo,arintaas sifiican ayaa loogu guulaystay.
Waxaa cajiib ah in guriga hada Masajidka laga dhigay oo masaajid ahaan iyo madarasabo loo isticmaalo in laga iibiyay oo uu iska lahaa duqii Magaalada waana kii Markii hore dacweeyay,lahaana waa inay guuraan dadkan madow.
Sidoo kale ninkii madaxa doofaarka ku soo tuuray muslimiintii oo tukanayso wuu is dilay oo wuu dhintay, arimahaas waxay natusinayaan in diintaan illahay aysan jirin cid is hortaagi karto.
Hada masaajidaas waxaa sanad walbo ku xifdiyo qur’aanka rabi arday faro badan,waxaa ka socdo duruus Islaami ah,wuxuu Muslimiinta dagan aagaas uu u yihiin hoyga ay ula soo noqdaan umuurahooda aakhio iyo aduunba.
Culimada iyo ducaada joogto magaalooyinkaas waxay juhuudooda isugu geeyeen sidii ay dacwada Saxiixa ah u gaarsiin lahaayeen muslimiinta dagan iyo kuwa aan muslimkaba ahaynba.
Illaahay ha xifdiyo.
Kormeerkii dacwadeed ayaa wuxuu noogu soo dhamaaday si guul ah,illahay ayaa ku mahadsan.
XAFIISKA DACWADA IYO ICLAANKA EE MAJLISKA.